Farqiga u dhexeeya cations iyo dharka suufka ah
Dharka cationic iyo dharka suufka saafiga ah labaduba waxay leeyihiin astaamaha jilicsanaanta wanaagsan iyo dabacsanaanta wanaagsan. Midkee wanaagsan, waxay ku xiran tahay doorbididda shaqsiyeed. Dharka suufka saafiga ahi had iyo jeer wuxuu ahaa nooc maro ah oo qof kastaa doorbidayo inuu isticmaalo nolosha, halka maryaha cationic -ku ay yihiin kuwo ...
Sida loo doorto dharka arooska tulle?
Dharka qaabka arooska ee fudud ma aha oo kaliya inay aroosadda ka dhigto mid ka sii cusub oo dabiici ah, laakiin sidoo kale waxay ugu yeereysaa jaceylka aroosadda ee qalooca jirkeeda. Waxaa kaloo loo diyaarin karaa aroosyada dibadda sida aroosyada xeebta iyo aroosyada xoola -dhaqatada, si aroosaddu u noqoto mid xor ah. Soco oo fidi jirkaaga. F ...
Runtii ma fahantay marada tulle mesh?
by admin on 08-20-21
Sidee loo tolaa dharka tulle mesh? Sida loo xiro dharka tulle mesh Ma rabtaa inaad ogaato? I soo raac oo hoos u fiiri, Habka loo tolayo dharka tulle mesh: Waxaa lagu tolan karaa mugdi iyo daabac. Dharka mesh waa mid aad u dabacsan, maxaa yeelay inta badan dharka mesh tulle wuxuu ka samaysan yahay polyester iyo kiimiko kale ...
Maxay “siyaasadda saddexda carruur ah” u keenaysaa warshadaha dharka carruurta?
Suuqa cusubi wuxuu dhaliyaa warshadaha “kaydka iman kara” “Siyaasadda carruurta saddexda ah” oo aad u saamaysay, waayo warshadaha dharka carruurta shaki la'aan waa war wanaagsan. Tan iyo markii la hirgeliyay “siyaasadda hal-ilmo laba-carruur ah” ee 2013 iyo hirgelinta “com ...
Dhoofinta alaabta dharka guriga iyo isboortiga ayaa xoog leh.
Laga soo bilaabo Janaayo ilaa Maajo 2021, dhoofinta dharka Shiinaha (oo ay ku jiraan agabka dharka, isla hoose) ayaa gaadhay 58.49 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, oo kor u kacday 48.2% sannadkii iyo 14.2% isla muddadaa isla sannadka 2019. Isla bishaas May, dhoofinta dharka wuxuu ahaa $ 12.59 bilyan, oo kor u kacay 37.6 boqolkiiba sanadkii iyo ...
Dhoofinta dharka guryaha ee Shiinaha ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey shantii bilood ee ugu horreysay sannadkan
Shantii bilood ee ugu horreysay sannadkan, dhoofinta dharka Shiinaha ee Shiinaha ayaa si buuxda u soo kabsaday, iyadoo heerka dhoofinta uu gaaray heer aad u sarreeya, dhoofinta gobollada iyo magaalooyinka waaweyn dhammaantoodna waxay gaareen kobac ballaaran. Baahida suuqa dharka ee guriga ee caalamiga ah ayaa weli ah mid xooggan, hoygeena ...
Jiilka soo koraya ee Shiinaha ayaa dib u ogaanaya dhaqanka “dharka wanaagsan”
by admin on 06-21-21
Saacadda eber saacaddu markay ahayd 1-da Juun, hawsha dhiirrigelinta ee badhtamaha sannadka oo hore loogu sii kululaynayay aaladaha e-commerce sida Tmall iyo Jingdong ayaa si rasmi ah u bilaabantay. Isla markii ay hawshu bilaabantay, waxay kicisay xamaasadda isticmaalka netizens -ka, xogtuna waxay dejisay dib -u -cusboonaysiin cusub ...
Maxaa beddelaya cudurrada faafa ee keenay dharka iyo isticmaalka dharka
by admin on 06-07-21
Maaddaama cudurrada faafa ee adduunku marba marka ka dambaysa ay sii kordhayaan, warshadaha dharka iyo dharka ayaa iyaguna la kulmaya kor -u -kac iyo hoos -u -dhac soo -kabasho dhaqaale. Xaaladda cusubi waxay dardar gelisay isbeddelka sayniska iyo teknolojiyadda ee warshadaha, oo dhashay foomam ganacsi iyo moodallo cusub, a ...
Habka daloolka ayaa bilaabay inuu caan noqdo
by admin on 05-31-21
Dharka duuduuban ayaa inta badan lala xiriiriyaa caajisnimo, laakiin dunida moodka oo mar walba isbedeleysa, duuduubku wuxuu noqday cunsur caan ah. Dhab ahaantii, caanka ah ee style pleated ayaa muddo dheer la raad raacay. Qaabkii Paris ee sannadka 2019 -ka, waxaa soo ifbaxayay walxo qallafsan. Qurxinta hodanka ah waxay abuurtaa saddex ...
Xafiiska Tirakoobka Qaranka: Bishii Abriil ee ugu horreysay, qiimaha dheeraadka ah ee warshadaha dharka ee ka sarreeya baaxadda la cayimay ayaa kordhay 16.1%
by admin on 05-24-21
Sida laga soo xigtay Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka (NBS), qiimaha dheeraadka ah ee shirkadaha warshadaha ee ka sarreeya baaxadda loo qoondeeyay waxay korodhay 9.8% sannad-sannadka bishii Abriil, waxay sare u kacday 14.1% isla muddadaa sannadka 2019 iyo celcelis ahaan kobaca 6.8% laba sano. Laga soo bilaabo aragtida bil-bil, bishii Abriil, ind ...